Waa nooca loo yaqaan 'generator' keyword Amazon?
Ka hor inta aan sii wadno adoo dooranaya erayga muhiimka ah ee keyda Amazon si aad u hagaajisid alaabtaada sida ugu fiican ee suurtogalka ah, aan ku bilowno barashada yar. First of all, aynu soo aragnay - haddii aad rabto in aad si caadi ah u baadhaan aalada Amazon badeecada, waxaad u baahan doontaa inaad u rogto boggaaga wax soo saarka mid aad u raaxo leh, taas oo ah algorithm-raadinta A9. Sidaas, mashiinka raadiyaha weyn ee Google iyo Amazon ayaa isticmaalaya jaangooyooyin kala duwan si loo go'aamiyo in natiijada raadinta qaarkood ay tahay xaqiiqo wanaagsan. Waa kuwan sida ay u shaqeyneyso mid kasta:
1. Amazon waxay isticmaaleysaa isugeyn si ay u go'aamiso sida dhabta ah ee boggaaga soo-booqdaha alaabadu u socdaan kuwa iibsada dhabta ah ee bixiya.
2. Google ayaa inta badan ku saleysneysa waqtiga celceliska isticmaalaha, oo ay weheliso qiyaastii qiime-dhimista qiimaha.
Iyadoo la tixgelinayo kala-duwanaanshaha kor ku xusan, waa wakhti ay ku noqoto mid wax ku ool ah ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah. Iyo hoosta waxaan doonayaa in aan ku tuso dhowr ka mid ah qalab fiican oo loo yaqaan 'Amazon keyword generator' si ay liiskaaga wax soo saarku u noqdo mid si fiican loo fiicnaado. Ugu dambeyntii, si aad u aragto naftaada oo ka mid ah natiijooyinka raadinta ee ugu habboon ee ku saabsan in ka badan meel suuqa badan. Si aad u noqoto mid wax ku ool ah ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah, tixgeli arrimahan soo socda iyo talooyinkan la taaban karo:
1. Ka fikir dibadda sanduuqa. Waxaan loola jeedaa waxaad ka heli kartaa keyword keyword keyword ama key-shay-baara wax-soo-saarka dheer - qaab kasta oo dukaameyste nool wuxuu raadin karaa badeecadan iibka ah.
2. Weligaa ha ka waaban inaad tijaabiso thesaurus si aad u ogaato qaar kale oo macquul ah ama macnaha ereyada raadinta ee LSI waa laga yaabaa inay isticmaasho dadka isticmaala dukaamada Amazon.
3. Soo saar qoto dheer iyadoo la isticmaalayo qalabka wax lagu dhejiyo Amazon iyo qalab soo jeedin, sida MerchantWords ama Kormeeraha Keyword - oo la sameeyo.
Tani waxay si khaas ah loo diyaariyay soo saaraha ereyga muhiimka ah ee Amazon iyo mareegta cilmi-baarista waxay kaa caawin kartaa inaad horumariso jaangooyooyin raadin badan oo dheeraadka ah. Ugu dambeyntii, si aad u kordhiso iibka guud ee shabakada. MerchantWords ayaa inta badan ku qeexan xogta keydka ballaadhan ee keydka ah kaas oo daboolaya in ka badan 170 milyan oo kelmado furaha ah iyo isku-darka raadinta ee ugu sarreeya oo ay isticmaalaan dukaamada nool ee raadinaya alaabooyinka iibka.
Maxay tahay - qalabkan loo yaqaan 'generator keyword' (bogga internetka, inuu noqdo mid sax ah) ayaa noqon kara xalka ugu fiican, gaar ahaan iibiyeyaasha soo-baxa ee aan caadi ahaan ka yareynin Raadinta Qodobka Awooda (SEO).
KeywordInspector waa qalab aad u weyn oo loo yaqaan 'Amazon keyword generator tool' oo ku siin kara talooyin wax ku ool ah oo aad u qiimo badan si aad u noqotid tartan, xitaa hoosta tartanka suuqa suuqyada daran. Waxa kaliya ee xun ee ku saabsan barnaamijkan online-ka ah waa in qarashka bil kasta ee qiyaastii 40 bucks ay noqon karaan kharash aad u badan oo loogu talagalay qaar ka mid ah ganacsadaha yar yar ee iibiya on Amazon. Si kastaba ha ahaatee, waxaan rumaysanahay in qalabkani uu yahay mid u qalma in lagu tijaabiyo xaalad kasta. Inta badan ay sabab u tahay mid aad u waxtar leh ikhtiyaarka Search Daalacanayo keyword, kaas oo kaa caawin kara inaad sii had iyo updated adigoo oo dhan isku keyword cusub top ee toddobaadlaha ah ama xitaa maalin kasta Source .